Biography nke Andreichenko Natalia
Ònye na-amaghị natalia Andreichenko? N'ezie, nke a bụ nzuzu ajụjụ, n'ihi na onye ọ bụla maara nwanyị a. A sị ka e kwuwe, anyị niile hụrụ fim ahụ, nke bụ akụkọ ndụ Andreichenko. Ee, ee, anyị na-ekwu maka otu n'ime eserese egwu kachasị ama, nke ghọrọ akụkọ ndụ ama ama nke Natalia. Nke a, n'ezie, ihe nkiri "Mary Poppins, goodbye! ". Otú ọ dị, akụkọ ndụ nke Natalia Andreichenko mara na ọ bụghị nanị maka fim a. Na biography nke Natalia Andreichenko e nwere ọtụtụ ihe osise ndị ọzọ mara mma. N'ikpeazụ, onye omekome a nwere nkà na-enwekarị ihe ijuanya na nwanyị na nkà ya. Natalia nwere ọdịdị na àgwà nke ezigbo nwanyị. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ọ bụ Andreichenko bụ onye na-akpọ Bekee onye nọnarị Mary, bụ onye, ​​ya na ịma mma na ịma mma ya, meriri onye ọ bụla gburugburu, ndị okenye na ụmụaka. Na agbakwunye na ọdịdị dị mma na àgwà, Natalia, kwa, nwere olu mara mma. Andreychenko - nke a bụ ihe nnọchianya nke mmekọahụ mara mma, nke jikọtara ihe kachasị mma nke nwanyị nwere ike inwe. Ya mere, akụkọ banyere nwanyị a dị ịtụnanya nke ihe nkiri vidio Soviet, ka nwere mmasị na ọtụtụ na ọtụtụ.
Natalia bụ onye obodo Moscow. Ọ bụ ebe ahụ ka akụkọ ndụ ya malitere ma a mụrụ ya na May 3, 1956. Ndị mụrụ ya bụ ndị nwere ọgụgụ isi na ndị gụrụ akwụkwọ. Papa m na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ụgbọelu, na mama m - na Ministry of Education. Nwatakịrị nwanyị ahụ site n'oge ọ bụ nwata nwere mmasị na nkà. Mgbe ọ dị nanị afọ ise, ndị mụrụ ya kpọgara ya na ballet The Sleeping Beauty. Natasha nwere mmasị nke ukwuu n'ihe ọ hụrụ na ogbo ahụ, na nwa agbọghọ ahụ kpebiri, na-akwụ ụgwọ, ịghọ ballerina. Ọ dịlarị na ọkwa nke atọ ọ na-ahazi ịmepụta ballet na ụlọ akwụkwọ, ọ bụghị naanị na-echepụta ihe odide ahụ, kamakwa ọ na-abụ abụ egwu n'onwe ya. Ndị nne na nna hụrụ na nwa ahụ bụ mmalite mmalite, ya mere ha nyere ya ụlọ akwụkwọ egwu. Ná mmalite, nwa agbọghọ ahụ mụtara igwu egwu, mgbe ahụ ọ malitekwara ịmụrụ ihe na klas piano. Otú ọ dị, ọ dị mma ịmara na Natalia nwere mmasị ọ bụghị naanị na nkà, kama n'egwuregwu. N'ikwekọ na ọmụmụ na ụlọ akwụkwọ egwu, Andreichenko jikwa mmiri mmiri. Ma, ọ bụ ihe ntụrụndụ, n'ihi na Natasha maara otú egwuregwu a si emetụta ọnụ ọgụgụ ahụ. Ya mere, o nweghi oke mmasị n'ebe ya no, nke mere na onu ogugu ya agaghi akwusi ka o buru ihe mara mma. Mgbe natalia gụrụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị, ihe ọzọ dị egwu maka ya bụ akwụkwọ. Nwa agbọghọ ahụ chere ogologo oge banyere ihe ọ ka na-eme na ndụ. N'otu oge, o nwedịrị ka ọ kpebiri ịbanye na ngalaba nkuzi na Ụlọ Akwụkwọ University nke Moscow. Ma, mgbe nile, mgbe ọ tụlechara uru na nkwonkwo niile, nwa agbọghọ ahụ kpebiri na ya chọrọ ịbanye na ụlọ ihe nkiri ahụ. Ntre enye ama anam.
Nke mbụ, akwụkwọ nyocha Natalia na Shchepkin School. Ma, ọ dị mwute, Andreichenko agaghị ebe ahụ. N'eziokwu, ọdịda a akwụsịghị Natalia ma tinyeghachi akwụkwọ ahụ ọzọ, mana ugbu a ọ nọ na VGIK. Ọ bụ n'ebe ahụ ka nwatakịrị ahụ natara ọzụzụ. Ọ na-amụ na studio nke Sergei Bondarchuk na Irina Skobtseva. N'ezie, ọ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma, ịbanye na ndị omempụ a ma ama. Site n'ụzọ, nwa agbọghọ ahụ malitere ịgba agba mgbe ọ na-amụ ihe. Foto mbido, nke Natalia na-egwu, bụ ihe nkiri ahụ "Site na ụtụtụ ruo mgbede." Na ya, Andreychenko na-egwuri egwu n'afọ 1975.
Ọrụ na-aga nke ọma dị ka ezigbo nwanyị nkiri Soviet.
N'afọ 1977, Natalia gụsịrị akwụkwọ na VGIK. N'oge ahụ, ọ rụrụ ọrụ ise na fim ahụ. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ọbụna n'oge ahụ, Natalia chetara onye na-ekiri ya. Ma eleghị anya ndị mmadụ amaghị aha nwa agbọghọ ahụ, ma, n'agbanyeghị nke ahụ, ha amataworị ihe oyiyi ya, bụ nke na-ekwu banyere nnukwu talent onye omeeji. Ma Natalya a ma ama bụ mgbe ọ pụtara na "Siberia". O nwetara ọrụ nke Nastya Solomina, nwa agbọghọ mara mma Siberia. Ọ meriri obi ndị na-ege ntị n'ụzọ dị otú a, na, site n'oge ahụ, ọrụ ya dị ka onye na-eme egwuregwu ọkachamara malitere. Natalia ka na-ele ọrụ a dịka otu n'ime ihe kacha mma. Site n'ụzọ, ọ dị mma ịkọtara na fim ahụ nwetara nrite na ememe Kansk. Ọ bụ nanị na igbe nchịkwa Soviet na egosighi ya obere, ebe onye nduzi Konchalovsky gara mba ọzọ wee laghachi.
Mgbe "Sibiriada", Natalia kpalitere na fim ọzọ na-adọrọ mmasị, ebe o gosipụtara onwe ya dị ka onye na-eme ihe nkiri. Ọ bụ Samson Samsonov "Trade na poet". Mgbe nke ahụ gasịrị, Natalia na-arụ ọrụ episodic, ma ọ bụ ọrụ ncheta. N'afọ 1983, ọ bụ mmalite nke Andreichenko. Ọ bụ mgbe ahụ ka ihe nkiri ahụ bụ "Akụkọ Agha-agha" pụtara, nakwa, n'ezie, foto a na-apụghị ichefu echefu "Mary Poppins, Goodbye," nke Leonid Kvinikhidze dere. Ọ bụ na ihe nkiri a Andreichenko chọpụtara na onye ọ bụla na akụkụ ya nke nwanyị, nke ọ dịghị onye hụtụrụla. E kwuwerị, na ihe nkiri niile gara aga, ọ na-agwa ụmụ agbọghọ ndị mara mma, ụdị mma ndị dị na Siberia. Mgbe ahụ, na mberede, na nza ihu dị mkpa, dị ka birch, onye ukwu nke Bekee, onye nwere oke egwu egwu na ike. Ọ bụ na ihe nkiri banyere Mary Poppins, Natalia gosipụtara onwe ya na nkà na nkà ya niile. Foto a na-adọrọ mmasị na ụmụ nwoke na ndị toro eto. Na ihe nkiri "Mary Poppins, Goodbye" emeela ihe kariri otu ọgbọ ụmụ, onye ọ bụla na-enwekwa obi ụtọ mgbe niile site na nwa agbọghọ mara mma. Site n'uzo, o kwesiri iburu n'uche na Maxim Dunaevsky, bu onye di di di nma nke Natalia Andreichenko dere. Egwú a na vidio a maka ya ka ọ bụ nwata nwanyị a ma ama, na, n'ihi ya, onye na-ewu ewu bụ Natalia Vetlitskaya.
Na akwukwo agha nke ndi agha, Natalya nwere oru di iche. Ọ na-egwu Luba Antipova, nwanyị siri ike nke nwere ike ịbanye n'agha ahụ, na-agbanahụ ihe egwu nile, na n'ikpeazụ, ka na-enwe obi ụtọ.
Natalia Anderchenko rụrụ ọtụtụ ọrụ na-adọrọ mmasị, mgbe ahụ, ọ hapụrụ America. Ya na di ya gbagotara wee gawa maka Maximilian Shelle, onye ya na ya zutere mgbe onye nduzi gbawara na Russia. Nwanyị ahụ biri ogologo oge na America, ma n'ebe ahụ, ọ pụghị ịghọ onye a ma ama ma hụ ya n'anya. Mgbe alụmdi na nwunye ahụ mebiri Natalia laghachiri n'ala nna ya. Ọ maliteghachiri igwu egwu na ndi mmadu nakweere ya. Ka ọ dị ugbu a, Natalia bụ onye ntanetị ma tinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ mụrụ nwa nwoke na nwa nwoke: Nastya na Mitya, bụ ndị si na nne ya were talent maka nkà. Ya mere, gịnị ka anyị nwere ike ikwu n'eziokwu: Ndụ Andreychenko bụ ihe ịga nke ọma.
Star nke usoro TV Tim Roth
Ihe omuma nke Gisele Bundchen
Onye Nwunye Valeria Kiseleva
Ndụ onwe onye nke onye na-eme ihe nkiri bụ Alisa Freidlich
Ihu ụlọ ọrụ "Avon" - Salma Hayek
Curative Njirimara nke barberry
Cupcakes na aki oyibo na tomato
Prince William na Kate: Agbamakwụkwọ
Enwere m ike inye nwatakịrị onye onye nlekọta?
Egwuregwu omenala Asia - nkobe ntụziaka na Beijing n'ụlọ
Mmekọahụ nke nwanyị site n'anya ụmụ mmadụ
Ihe nzuzo nke anụ ahụ: mkpokọta nke Incanto Summer 2016
Sorbet nke egusi
A ga-enye nkwa na New Year
Olee otú ị ga-esi maa mma na 50: 5 nzuzo nke Julia Roberts
Yoga maka na-agbanwe agbanwe
White frozen ero ofe
Egwu mara mma site na May 1. Ụdị amaokwu dị nro maka sms maka ekele na May 1. Ekele si na May 1, 2016 nye ndị ọrụ ibe gị
Ihe oriri kacha mma maka ụmụ nwoke
Ejiri asụsụ salmon